ရသဆောင်းပါးစုံ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 175
Than Win Hlaing – ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အတ္ထုပ္ပတ္တိ ရှင်းတမ်း – အပိုင်း (၃)
သန်းဝင်းလှိုင် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၂ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့တွင် မက်ဇင်ဂျာနယ်သို့ ချီးမြှင့်ခဲ့သည့် ကိုမင်းကိုနိုင်၏ သရက်ထောင်တွင်းလက်ရာ ● ဘီဒီအေ ဖွဲ့စည်းသည့်နေ့စွဲအမှား ဘီဒီအေဆိုသည်မှာ ဗမာ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကို ခေါ်ဝေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဗမာ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် Burma Defence Army ဟု ခေါ်သောကြောင့် အတိုကောက်အားဖြင့် B.D.A (ဘီဒီအေ) ဟု ခေါ်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ဂျပန်တပ်မတော်နှင့်ဘီအိုင်အေတို့က မြန်မာနိုင်ငံကိုသိမ်းမိပြီးသောအခါ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အင်္ဂလိပ်တပ်များထွက်ခွာသွားပြီးဖြစ်၍ အင်္ဂလိပ်တပ်များပြန်ဝင်မလာနိုင်စေရန် ကာကွယ်ရန်သာလိုသည့်အတွက် ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (ဘီအိုင်အေ) ကို ဗမာ့ကာကွယ်ရေး တပ် မတော် (ဘီဒီအေ) ဟု ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲမှာ ၁၉၄၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် ၂၇ရက် ဖြစ်သည်။ မြဒေါင်းညိုကလောင်အမည်ခံ ဒေါက်တာအောင်သိန်းပြုစုသည့် `ရဲဘော်သုံးကျိပ်´ ပထမတွဲစာအုပ် စာမျက်နှာ...
အညတရအကျဉ်းသားရဟန်းတော်များ (၁၃) အရှင်ကုမုဒ (ခ) ကျော်ဝင်း
အရှင်ပညာနန္ဒ ဖေဖ၀ါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၂ အမည်- အရှင်ကုမုဒ (ခ) ကျော်ဝင်း မွေးဖွားရာဒေသ – (—) စဉ့်ကူးမြို့ နယ်၊ မန္တလေးတိုင်း။ မွေးသက္ကရာရာဇ် – ၁၉၆၂ အဖမ်းခံရသည့်နေ့စွဲ – ၁၉၈၉ ပုဒ်မ – ၆ (၁) ၁ ၀/၁၄ (ဃ) ၆ (က) (ခ) ၅ စီရင်ချက်ချနေ့ နေ့စွဲ – ဇန်န၀ါရီ ၂၂၊ ၁၉၉၁ ချမှတ်ခံရသည့်ထောင်ဒဏ် – (၁၁) နှစ်။ နေခဲ့ရသည့်ထောင်များ – ပြည်၊ သာယာဝတီ၊ လွိုင်ကော်ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း (လုပ်အားပေးစခန်း) ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာ။ လွတ်မြောက်သည့်နေ့ - ၁၉၉၄ ခုနှစ်။ ● ရှစ်လေးလုံးအရေးအခင်းကာလ...
၀တ်မှုန် (စင်ကာပူ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၂ ကျွန်တော် နိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာသာရေးတရားဟောဆရာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော် နိုင်ငံကိုကောင်းစေချင်တဲ့ ခရစ်ယာန် ဘာသာရေးမီဒီယာလုပ်ငန်းလုပ်ပါတယ်။ အင်တာနက်မှာ 5-Feb-2012 YouTube ခရစ်ယာန်တစ်ဦးရဲ့ဘ၀အကြောင်းကို နားထောင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ၊ သူပြောသလို သူနဲ့ကိုယ်က RIT ဘွဲ့ရချင်းအတူတူ၊ ခရစ်ယာန်လည်းတူ ..ဆိုတော့ အလွန်စိတ်ဝင်စားမိတယ်။ အံ့သြလွန်းလို့ တခြား RIT နဲ့ဆက်နွယ် သူတွေကိုမေး ကြည့်တော့ ဟုတ်လားလို့ပဲ ပြန်မေးခံရတယ်။ ဇတ်လမ်းကတော့ … အသက် (၇) နှစ်အရွယ် သူရိန်ထွန်း ဆိုသူ မိဘ ၂ ပါးနဲ့၊ သူ့ညီမလေးရယ် သထုံဖက်၊ ကားနဲ့ခရီးထွက်စဉ် စစ်တပ်က အမေ့ကို မုဒိမ်းကျင့်၊ အဖေ့ကိုဘက်နက်နဲ့ထိုးသတ်၊ ကားနဲ့အလောင်း ဓါတ်ဆီလောင်းမီးရှို့ပြီး၊ မောင်နှမ ၂...
Cho Tu Zaw – ဒီအကြောင်း မရေးချင်ဘူး
ဒီအကြောင်း မရေးချင်ဘူး ချိုတူးဇော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၂ မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားကိစ္စ ၀င်မရေးလို့ ဆိုပြီး မိတ်ဆွေတယောက်က လာပြောတယ်… ဘာရေးရမှာလဲ ဗျာ။ ကျနော်ထောင်ထဲရောက်နေတုန်း ရုံးထုတ်တဲ့အချိန် အချုပ်ခန်းဘေးကိုလာ နှုတ်ဆက်သွားတဲ့ကိုရဲလင်း၊ ကျနော်တို့မရှိတုန်း ရုံးခန်းကို အပိုင်စီးတာကွ ဆိုပြီးတက်နေခဲ့တဲ့ စမ်းချောင်းအခသက ဘိုဘိုလေး၊ နောက် ညီနောင်ပါတီဖြစ်တဲ့ မန္တလေးအနကလ က ကိုစိုးလင်း၊ နောက် အောင်နိုင်…။ ဒီလူတွေ အတူထွက်သွားကြတယ်။ တယောက်က ဥက္ကဋ္ဌ လုပ်တဲ့အချိန်မှာ ကျန်တဲ့လူတွေကို ထောက်လှမ်းရေးလို့စွတ်စွဲပြီး ရက်ရက်စက်စက် မကြားဝံ့မနာသာတွေ ကျူးလွန်ခဲ့တယ်။ ကျနော်က ကျန်ခဲ့ရတဲ့ လူဆိုတော့ဘာမှ မပြောနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒီကိစ္စတွေ ကို ဖေါ်ထုတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာ တဖွဖွ ပြောခဲ့တယ်။ ပြည်တွင်းမှာလည်းကိုစိုးလင်းတို့ ဘိုဘိုတို့ဟာ ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆိုတော့ အကုန်သိထားတယ်။...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအတ္ထုပ္ပတ္တိ ရှင်းတမ်း – အပိုင်း(၂)
သန်းဝင်းလှိုင် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၂ သရုပ်ဖော်ပန်းချီအား Messenger မှ ကူးယူအသုံးပြုပါသည်။ ● ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်များ သွေးဖောက်ပြီးသစ္စာပြုနေ့အမှား မြန်မာမျိုးချစ်လူငယ်များ ဟိုင်နန်ကျွန်း စစ်သင်တန်းကျောင်းတွင် တက်ရောက်သင်ကြားနေသော စစ်ပညာများသည် ၁၉၄၁ အောက်တိုဘာ လဆန်းတွင် ပြီးဆုံးပြီးနောက် အောက်တိုဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင် စန်းယ စစ်ပညာသင်တန်းကျောင်းကိုပိတ်၍ ထိုင်ဝမ်ကျွန်းရှိ တာမာဆာ တိုမြို့ (Tamasato) သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ယင်းနောက် အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက် တနင်္လာနေ့တွင် တာမာဆာတိုမြို့ ဗိုလ်သင်တန်း ကျောင်းတွင် စစ်သေနင်္ဂဗျူဟာပညာနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သည့် နောက်ဆုံးပေါ်လက်နက်များ သုံးစွဲနည်း၊ ပြင်ဆင်နည်းများကို ဆက် လက်သင်ကြားခဲ့ကြသည်။ ယင်းနောက် ဂျပန်တို့သည် ၁၉၄၁ ဒီဇင်ဘာ (၇) ရက်နေ့တွင် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်း ဟာဝိုင်ယီကျွန်း...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အတ္ထုပ္ပတ္တိ ရှင်းတမ်း – အပိုင်း(၁)
သန်းဝင်းလှိုင် ဖေော်ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၂ ၂၀၁၂ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့သည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ မွေးနေ့ဖြစ်သလို မြန်မာနိုင်ငံကလေးများနေ့လည်း ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်သာသက်ရှိထင်ရှားရှိခဲ့သော် ယခုနှစ်ဆိုလျှင် အသက် ၉၇ နှစ် ရှိပြီဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် အစိုးရသစ်တက်လာပြီးနောက် စာပေစိစစ်ရေးနှင့် မှတ်ပုံတင်ဌာနမှ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် စာအုပ်များကို ရေးသား၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခွင့်ပြုလိုက်သဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ပတ်သက်သော စာအုပ်ပေါင်း (၁၀၀) နီးပါးခန့် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိလာ သည်ကိုတွေ့ရသည်။ အဆိုပါစာအုပ်များအနက် အများစုမှာ ယခင်နှစ် ၅၀ အတွင်းကထုတ်ဝေခဲ့ပြီးသောစာအုပ်များကို ပြန်လည်ထုတ်ဝေ ခဲ့သလို ပြန်လည်ရေးသားထားသည့် စာအုပ်အသစ်များကို လည်းတွေ့ရသည်။ အချို့စာအုပ်များသည် တချိန်က ကလောင်စုံရေးသားခဲ့သည့် ဗိုလ်ချုပ်နှင့်ပတ်သက်သောဆောင်းပါးများကို စုစည်းထားသလို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအတ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ် ၄၊ ၅ အုပ်ကိုမှီး၍ ပြန်လည်ရေး...
မဟန ဘာလဲ ဘယ်လဲ ဘာလုပ်မှာလဲ?
အရှင်ပညာနန္ဒ ဖေဖ၀ါရီ၊၀၉၊ ၂၀၁၂ နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့က ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလကစပြီး တနှစ်တိတိ တရားဟောခွင့် ပိတ်ပင်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ အချိန်ကာလ ပြည့်မြောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ရွှေည၀ါဆရာတော်အား ပြန်လည်တရားဟောပြောခွင့်ပြုလိုက်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယက ဥက္ကဋ္ဌ ဗန်းမော်ဆရာတော်ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ထိုးပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့ သာသနာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနက သံဃမဟာနာယကဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ရဲ့ လက်မှတ်ဟာ တရားမ၀င်ဘူးပြောဘူးလို့ပြောကြောင်း သတင်းတွေဖတ်ရတဲ့အတွက် ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ကြီးကိုယ်စား စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါ တယ်။ သံဃာ့ရေးရာကိစ္စတွေနဲ့ပက်သက်ရင် သံဃမဟာနာယကဆိုတာ အစိုးရခိုင်းတာလုပ်ပေးရတဲ့ (ဟန်ပြသံဃနာယက) အဖွဲ့လို့ ရဟန်းရှင် လူတွေပြောနေကြာတာဟာ ဒီကိစ္စကမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေခံနေပါပြီ။ အမှန်ပြောရရင် သံဃမဟာနာယကဆရာတော်တွေကိုယ်စားလည်း ရှက်မိပါတယ်။ သံဃာ့ကိစ္စတွေမှာ သံဃာက လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘဲ အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေက ၀င်ရောက်ခြယ်လှယ်နေ တာကို သံဃမဟာနာယကဆရာတွေက တုဏှိဘာဝေ လုပ်နေကြတဲ့အ တွက် သံဃာတွေ နှစ်ခြမ်းကွဲအောင် လုပ်ပေးနေသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ တကယ်တော့ရွှေည၀ါဆရာတော်ရဲ့တရားပွဲတွေအပိတ်ခံရတာဟာ ထေရ၀ါဒတရားတော်တွေကနေသွေဖီလို့မဟုတ်ဘဲ...
မောင်ရစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၂ ဒီနေ့မှာ အေဘီမြောက်ပိုင်းမှာ မတရားသတ်ဖြတ်ခံပြီး ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေအတွက် အနှစ် ၂၀ ကြာတော့မှ အများစုပေါင်းတဲ့ ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြု ဆုတောင်းတဲ့ ဆွမ်းကျွေးပွဲတွေ ပြည်တွင်းပြည်ပမှာ ပြုလုပ်ဖြစ်တယ်။ အဲသည်ဖြစ်ရပ်ကို အနှစ် ၂၀ ကြာမှ ထုတ်ဖော်ပြီး လူအများ သိရှိခွင့်ရတယ်၊ အနှစ် ၂၀ ကြာမှ ဆွမ်းကျွေး ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခွင့်ရတယ်။ မတရားစွပ်စွဲပြီး လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရတယ်ဆိုတာကို အနှစ် ၂၀ ကြာမှ ကျန်ရစ်တဲ့ ရဲဘော်တွေ၊ မိသားစုတွေ၊ မိတ်ဆွေတွေက အများသူငှာ သိရှိကြစေဖို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြရတဲ့အတွက် ၀မ်းနည်း ၀မ်းသာ ဖြစ်မိတယ်။ ဂုဏ်ယူတဲ့ စိတ်လည်း ဖြစ်မိတယ်။ ၀မ်းနည်းတယ်ဆိုတာ သူတို့တတွေဟာ အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင် တိုက်ပွဲဝင်နေကြရင်း မတရားစွပ်စွဲခံကြရပြီး...
>Talk with Artist Htein Lin – The Art and The Artist Himself
> ပန်းချီထိန်လင်းနဲ့ စကားလက်ဆုံ (လွတ်လပ်တဲ့အနုပညာနဲ့ လွတ်လပ်မှုကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်၊ ချစ်ခြင်းကို မခွဲပါနဲ့) မိုးမခ ဇူလိုင် ၇၊ ၂၀၀၈ မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ကစပြီးတော့ မြန်မာအရေးလှုပ်ရှားသူ အဖွဲ့ ၂ ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် အေအေပီပီ(ဘားမား)နဲ့ အက်ဖ်ဒီဘီ တို့က မြန်မာနိုင်ငံက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုကို စတင် ဖော်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီက ထုတ်ပြန်တဲ့ ပိုစတာ၊ စာရွက်စာတမ်းများထဲက တီရှပ်မှာ ပန်းချီထိန်လင်းရဲ့ ပန်းချီကားနဲ့ ထုတ်ဝေထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီရေး အရေးတော်ပုံမှာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတဦး၊ နယ်စပ်ရောက် တောခိုကျောင်းသား၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား၊ ပန်းချီဆရာ၊ ကိုယ်တိုင်သရုပ်ဖော်တင်ဆက်တဲ့ အနုပညာရှင် စတဲ့ ဖြတ်သန်းမှု ဆေးရောင်စုံနဲ့ ယခုလည်း ပြည်ပမှာ...
Page 175 of 175«1...171172173174175
ဆွေဝင်း (Myanmar Now) ● သူရဲကောင်းဖြစ်လာသည့် ဒုရဲမှူးမိုးရန်နိုင်၏ အနာဂတ်
ကာတွန်း ရာဇာ သာစည် - စားမှာပဲ
မောင်အဉ္စန ● မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန် ငြိမ်းချမ်းရေး - အပိုင်း (၃)
ကာတွန်း OKKW ရဲ့ ခေတ်နှစ်ခေတ်
မောင်ရစ် – မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုတဲ့ အိုဘားမားနဲ့ စကားလက်ဆုံ
ခိုင်ကြည်သစ် ● တည်ငြိမ်မှုကိုလည်း မထိခိုက်စေ၊ အပြောင်းအလဲတွေလည်း ဖြစ်ပေါ်စေ
မောင်အောင်မွန် ● ကျနော်တွေးမိသလို ရေးပါမည် (၂၄၃)
အေးငြိမ်း - ကျွန်တော်မရေးချင်သည့် ကိစ္စတစ်ခု
မောင်မောင်စိုး ● လွမ်းရစ်ဝေသော နေ့များ ညများ ဘဝပေါင်းများစွာ - အပိုင်း (၆)
မောင်ရင်ငတေ ● မိုဒီလျာနီရဲ့ ယန်းဟေဗျူတန်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအတ္ထုပ္ပတ္တိ ရှင်းတမ်း - အပိုင်း(၂)
ထင်အောင် - ကျွန်တော်နှင့် ကျန်းမာရေး
သားကြီးမောင်ဇေယျ ● သတိ မီးနီမဖြတ်ရ
မောင်မောင်စိုး - ကချင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်စစ်သည်များ၏ ကောက်ကြောင်း - အပိုင်း (၉)
ကွန်ကရစ်တောထဲက သားကောင်၊ လှောင်ချိုင့်ထဲက ချိုးငှက် - အပိုင်း (၉)
အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) နုိုင်ငံရေးကျူးကျော်မှု
ဇော်ထက်(ပျဉ်းမနား)- သူရို့ကိုလား၊ ဆရာ့ထီးတစ်လက်ငှား သင်္ကြန်မှာ ကာပြီး ထားချင်ရဲ့
Join 93,421 other subscribers
နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန် Select Month April 2018 (161) March 2018 (162) February 2018 (145) January 2018 (195) December 2017 (157) November 2017 (193) October 2017 (154) September 2017 (148) August 2017 (163) July 2017 (180) June 2017 (195) May 2017 (240) April 2017 (190) March 2017 (243) February 2017 (253) January 2017 (234) December 2016 (210) November 2016 (276) October 2016 (257) September 2016 (238) August 2016 (262) July 2016 (256) June 2016 (238) May 2016 (292) April 2016 (271) March 2016 (286) February 2016 (277) January 2016 (245) December 2015 (281) November 2015 (330) October 2015 (356) September 2015 (303) August 2015 (299) July 2015 (245) June 2015 (229) May 2015 (125) April 2015 (163) March 2015 (227) February 2015 (199) January 2015 (225) December 2014 (216) November 2014 (198) October 2014 (226) September 2014 (209) August 2014 (242) July 2014 (240) June 2014 (214) May 2014 (252) April 2014 (242) March 2014 (230) February 2014 (234) January 2014 (281) December 2013 (237) November 2013 (205) October 2013 (246) September 2013 (261) August 2013 (295) July 2013 (285) June 2013 (248) May 2013 (249) April 2013 (441) March 2013 (285) February 2013 (267) January 2013 (319) December 2012 (309) November 2012 (248) October 2012 (229) September 2012 (209) August 2012 (242) July 2012 (281) June 2012 (264) May 2012 (230) April 2012 (222) March 2012 (230) February 2012 (187) January 2012 (279) December 2011 (286) November 2011 (237) October 2011 (277) September 2011 (234) August 2011 (193) July 2011 (248) June 2011 (286) May 2011 (194) April 2011 (256) March 2011 (224) February 2011 (153) January 2011 (179) December 2010 (167) November 2010 (218) October 2010 (219) September 2010 (228) August 2010 (163) July 2010 (163) June 2010 (175) May 2010 (190) April 2010 (158) March 2010 (158) February 2010 (143) January 2010 (156) December 2009 (160) November 2009 (143) October 2009 (128) September 2009 (126) August 2009 (139) July 2009 (163) June 2009 (149) May 2009 (199) April 2009 (150) March 2009 (172) February 2009 (135) January 2009 (144) December 2008 (127) November 2008 (140) October 2008 (142) September 2008 (142) August 2008 (159) July 2008 (122) June 2008 (114) May 2008 (155) April 2008 (148) March 2008 (129) February 2008 (127) January 2008 (104) December 2007 (71) November 2007 (110) October 2007 (42)
ကာတွန်း Joker ရဲ့ ဘာပြောင်းတာ တွေ့ချင်သေးလဲ …. https://t.co/028I54AKgP https://t.co/FnJ0tYekk1 about2hours ago ReplyRetweetFavorite
အေးငြိမ်း – ကျွန်တော်မရေးချင်သည့် ကိစ္စတစ်ခု https://t.co/YrP8BCjZhc https://t.co/TGKwpGpXfq about5hours ago ReplyRetweetFavorite
ဆွေဝင်း (Myanmar Now) ● သူရဲကောင်းဖြစ်လာသည့် ဒုရဲမှူးမိုးရန်နိုင်၏ အနာဂတ် https://t.co/HwO3IKgaGL https://t.co/VDo5p1ckC7 about 19 hours ago ReplyRetweetFavorite
ခိုင်ကြည်သစ် ● တည်ငြိမ်မှုကိုလည်း မထိခိုက်စေ၊ အပြောင်းအလဲတွေလည်း ဖြစ်ပေါ်စေ https://t.co/UW4kc12okL https://t.co/V5RqLgDipA about 19 hours ago ReplyRetweetFavorite
ပိုင်စိုးဝေ – သိန်းစွန်ငှက် အပြန်လမ်း https://t.co/3lNEe4nC4F about 20 hours ago ReplyRetweetFavorite
Cartoon Box (3,403)